अनौठो दैवीशक्तिले भरिएको शिवलिङ्ग जहाँ हरेक १२ वर्षमा चट्याङ पर्छ, चमत्कारी शिवलिङ्गको दर्शन गरि शेयर गरौँ ! – ताजा समाचार
अनौठो दैवीशक्तिले भरिएको शिवलिङ्ग जहाँ हरेक १२ वर्षमा चट्याङ पर्छ, चमत्कारी शिवलिङ्गको दर्शन गरि शेयर गरौँ !
त्यहाँका पुजारीहरुले फुटेको शिवलिंगलाई जोड्दछन् र घिउको लेप लगाउँदछन् । ताकि शिवजीले पीडाबाट राहत पाउन सकुन् । त्यसैले यो मन्दिरलाई स्थानीयले ‘मख्खन महादेव’ पनि भन्दछन् । यस अर्थमा उक्त शिवलिङ्ग निकै विशेष र चामत्कारिक मानिन्छ । पौराणिक मान्यताअनुसार त्यहाँको विशाल उपत्यका नागको रुपमा रहेको छ, जसको शिवले वध गरेका थिए । त्यसैले हरेक १२ वर्षमा भगवान इन्द्रले भोलेनाथ अर्थात् शिवजीको आज्ञा लिएर उक्त मन्दिरमा चट्याङ पार्दछन् भन्ने मान्यता रहेको छ।चट्यांङ किन पर्छ भन्ने बारेमा अझैसम्म पनि आधिकारिक तथ्य पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।